Kitchens sitere na plastik plastik na facades na kichin workpops
Kitchens si plastic - ihe bara uru na imeputa nke oge a
Kitchens nke plastik bụ ihe ngwọta ọhụụ, na-enye ohere iji mepụta ihe ọ bụla maka ire ụtọ na ụdị ọ bụla, ihe niile dị ọnụ ọnụ. Dị ka ihe ọ bụla ọzọ, plastic nwere uru na ọghọm ya, nke dị mkpa ịtụle mgbe ị na-ahọrọ.
Kitchens si plastic - pros na cons
A na-enwe ike ịhụ ebe a na-ahụ maka kichin dị iche iche nke nwere ihu igwe dị mma, nke dị mma ma ọ bụ matt. N'ezie, nkọwa a gụnyere ọtụtụ ụdị kichin. Nke bụ eziokwu bụ na plastik bụ ihe mkpuchi, ihe a na-eme na facade nwere ike ịdị iche - chipboard, fiberboard, MDF. Ihe mkpuchi ahụ, nke anyị na-akpọ okwu ọhụụ "plastic", dịkwa iche, nke ọ bụla n'ime ụdị kichin si na plastik nwere uru na nkwonkwo ya.
PVC ihe nkiri . Ihe ndị gụnyere gụnyere ohere nke ịmepụta ihe ọ bụla, nke gụnyere ọnụ ala, ọnụ ọnụahịa, nkwụsị nke nkwụzi na iguzogide mmebi ngwaọrụ. Ihe ọghọm dị oké mkpa bụ fragility nke mkpuchi dị otú ahụ. Ka oge na-aga, agba na-abawanye ụra, ihe ahụ anaghị anabata oke iru mmiri, kpo oku.
Akụrụngwa ihe nkiri . Enwere ihe dị iche iche dị iche iche, nke nwere ike ịsị na ị ga-eguzogide ìhè anyanwụ (adịghị ọkụ), mmiri na steam. Ụdị ihe dị otú a nwere ike ihu na ihu na ụdị ihe. E nwere ihe onwunwe na adịghị ike - ị gaghị enwe ike iwepụta ya, ọ na-esi ike ịsacha griiz, soot na adịghị ọcha ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ọzọ kwụsịrị nnukwu ụgwọ, ma ike nke facade kwesịrị ya.
HPL-plastic . Ihe mkpuchi dabeere na kraft akwụkwọ, na-eji phenolic thermoplastic resins maka impregnation. Ihe omuma a mara mma na ihe bara uru, a na-eji ya eme ihe n'ahịrị. Ọ naghị agbanwe agba n'okpuru nduzi nke ultraviolet, ọ naghị emerụ ma gharawapụ, dị ike ma na-eguzogide ihe ọ bụla. Enweghị ike ịba ụba nke mkpuchi ahụ nwere ike ịpụta na ọ bụ naanị mkpụrụ osisi ahụ ka ọ na-emepụta, ọ pụkwara iji ya mee ihe maka ọnụ ala, na ọnụ ahịa ya dị elu karịa ụdị ụdị plastik ndị ọzọ.
Enamel mkpuchi . Enwere ike ime ụdị ihe a na ihe ọ bụla e kere eke, elu ya bụ matte ma ọ bụ kenyacha. Enwere ike ịchọta uru nke mkpuchi àgwà ndị dị ka ohere nke mweghachi na mmebi, ihe kachasị mma, ịdị mfe nke nlekọta. Ọghọm - nhụsiri ike na mmebi na ọnụ ahịa dị ukwuu nke facades.
Agba nke kichin na plastic
A na-emepụta ọtụtụ ụdị ihe mkpuchi kichin dị na mpempe matt ma ọ bụ nsụgharị, nke nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya - ihe dị mma na-adọrọ mmasị ma mara mma, ihe eji eme ka ọ bụrụ ihe bara uru. N'ihe banyere ngwọta agba, ọ nwere ike ịbụ ihe ọbụla. Ndị kachasị ewu ewu na ime ụlọ a bụ:
kichin ọcha na plastic;
kichin kpara nke oji;
isi igwe isi;
igwe kpo oku .
Enweghi mkpuchi mara mma nke na-egbuke egbuke, na-acha odo odo, odo, odo odo, odo odo. Ihe ngwọta dị otú ahụ kwesịrị ekwesị n'ime ime ụlọ nke oge a, ma ọ bụrụ na ị họrọ ụcha maka agbachasị nke imecha na ihe ndị ọzọ na kichin. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịtụba n'ime ime - ọ bụrụ na kichin nke na-egbukepụ egbuke egbuke, ihe mgbidi na textiles, ọ ka mma ịhọrọ ụda dị nwayọọ ma dị jụụ.
Emepụta kichin si plastic
Na mgbakwunye na njirimara arụmọrụ dị elu, kichin, nke a na-eji mee ihe na plastik, ga-adọrọ mma n'ime ime ọ bụla - nkà na ụzụ nke oge a na ohere nke ihe a na-eme ka o nwee ike ịmepụta ihe ọ bụla n'ime ihe ọ bụla, site na ndị mara mma na oge ochie, nkà na ụzụ ma ọ bụ elu.
Ihe nkedo uhie maka kichin - imewe
Ịhọrọ ime n'ime kichin, ị ga-eche ozugbo banyere ọdịdị ihu igwe, karịsịa facades, plastic ga-eme ka ị ghọta echiche ọ bụla.
Ihe nkiri plastik oge ochie . Nke a bụ àgwà dị elu nke osisi, ìhè na ọnụ ọnụ karịa ọnụ ọgụgụ dị ala. Ụfọdụ teknụzụ na-enye gị ohere ịmepụta ọka na nhọrọ ndị ọzọ maka ihe ndozi.
A na-eji plastic mee ihe ejiji na ụdị oge a . Nke a bụ ọdịdị na njikọta nke ụdị, ergonomics na sara mbara nke ọ bụla mkpuchi na ebe ọrụ. Ọmarịcha anya dị ka ihe na-egbukepụ egbukepụ, na ihe mgbochi nke matt.
Ngwá ọkụ ndị dị elu na teknụzụ . A na-eji ụlọ ọcha ma ọ bụ isi awọ mee ihe na nke kachasị mma, ihe ndị a na-ahọrọ na-egbuke egbuke.
Achịcha na plastic na etiti aluminum
A na-eji okpukpu dị iche iche eme ihe ugbu a na ụdị dị iche iche, ọ bụkwa otu n'ime ngwọta kachasị ewu ewu nwere ike ịkpọ ebe a na-etinyere ya. Ihe ngwọta a dị mma nke ọma - ihe nkedo nke mkpuchi ọ bụla ga-akawanye mma. Tụkwasị na nke ahụ, osisi etiti alumini na-eme ka isi ihe dị irè karị - mgbe a kụrụ ya, akụkụ nke ụzọ ụzọ plastik nwere ike mebie, na aluminom na-adịgide adịgide ma nwee ntụkwasị obi mgbe ụfọdụ.
Ihe osise foto na plastic maka kichin
Otu n'ime ihe mbụ mere onye na-azụ ahịa na-eji chọọ kaadị plastịja bụ ohere nke ịde foto. Nke a bụ nnukwu ohere maka mmezu nke echiche ha, kichin na mkpuchi plastik nwere ụkpụrụ nwere ike bụrụ ihe na-egbuke egbuke, ha ga-elekwa anya nke ọma. E nwere ọtụtụ nhọrọ, otu ị nwere ike isi rụọ akwụkwọ na-emepụta kichin:
siri ike buru ibu n'elu ogwe elu;
ihe osise foto na obere oche;
Foto dị na ụlọ elu na nke ala;
ihe mma nke nkedo ọ bụla.
Kitchen plastic gloss
A na-eji kichin, bụ nke eji eji plastik mee ihe, dị oke mma n'ihi ọdịdị mara mma ya, nhazi ihu na mmepụta ihu nke ohere. Ma ihe dị otú ahụ nwere nnukwu ihe ọkpụkpụ - nkwụsịtụ nke nta, ọbụnadị mmehie nke njedebe ga-emebi ọdịdị ya, nke mere ka kichin gị mara mma mgbe niile, ị ga-ehichapụ ihe ọ bụla kwa ụbọchị, ma eleghị anya ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
Isiokwu elu nke plastic na kichin
N'okpuru aha kọmpụta kichin plastic, e nwere ihe DSP ma ọ bụ MDF kpuchiri ya na akwa akwa HPL dị ogologo. Ihe dị otú a na-ejikọta ọnụ na ihe ọ bụla facade, site na mmefu ego na chipboard na-agwụcha na nnukwu ọnụahịa. Uru nke okpokoro okpokoro n'elu gụnyere àgwà ndị a:
Ahịa ọnụ . Ọtụtụ mgbe, ọnụahịa ahụ na-eme ka ọtụtụ ndị na-ahọrọ ụdị nke kichin countertop.
Ntughari di iche iche di iche iche . E nwere ike ịmepụta kọmpụta kichin na-acha odo odo na agba, na ụdị osisi, nkume, ájá.
Ọ ga-ekwe omume iji ụdị ọgwụgwọ ọ bụla . Plastic adịghị eji nlekọta anya, na ọgwụ ndị dị n'ụlọ, ọbụna na-eme ihe ike, agaghị eme ya ihe ọ bụla.
Iguzogide ultraviolet . Ngwá ọrụ na-arụ ọrụ kọmpụ adịghị ọkụ na anyanwụ.
Na-eguzogide okpomọkụ . Oyiyi nke oma adighi ata ahuhu, ma oburu na i tinye ya na oku.
Ma na-esote ọtụtụ uru nke arụmọrụ plastik, enwere ọghọm ndị dị mkpa ịdee tupu ịmee nhọrọ.
Mmetụta uche na mmiri . Ọ bụrụ na n'okpuru mkpuchi plastik (na nkwonkwo, dịka ọmụmaatụ) mmiri na-enweta, okpokoro okpokoro na-agbaba, a ga-emerụkwa ya kpamkpam.
Enweghị ike mweghachi . Ụdị ihe dị iche iche, ibe, scratches maka mkpuchi a bụ ihe a na-apụghị izere ezere, ma a pụghị iwepụ ha.
Kwa ụlọ si plastic
Ihe kachasị mma n'oge a, dịka ọmụmaatụ kichin nke oge a, nke eji plastik mee ihe, dị mma, ọrụ, na mgbe ọ na-eme ya, onye mmepụta na-agba mbọ ịchekwa ohere dị ka o kwere mee. Ya mere, ime ụlọ na-ejiwanye kichin akụkụ, na-enye gị ohere iji nweta ọrụ kachasị elu na obere mpaghara. Nkuku ụlọ na-ele anya karịsịa nkecha na nke oge a, ọ bụrụ na facade nwere mgbidi okirikiri. Ihe ngwọta a na-enye ohere iji chọpụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mkpuchi plastik niile maka arịa, ma e wezụga maka HPL.
Onye ọ bụla dị mkpa n 'ndụ, gụnyere n'ime ime, ọ na-agụkwa onye agụụ maka mgbanwe ọ bụla. Ndị nke a ga - ejiri plastik mee ihe ọhụrụ nke oge a na-enwe ike ime mgbanwe dị mfe. Egwuregwu dị iche iche bụ ebe nchekwa ole na ole nke ụdị nke ọhụụ, mara mma nke ọma na n'akụkụ, nke nwere ike ịgbanwere ngwa ngwa ma tinye ya n'usoro ọ bụla. A na-eji kichin kichin dị iche iche mee ihe site na modulu dị iche iche.
Karịa ịsacha kichin si na plastik?
A na-eji ntụ plastik kpoo ihe dị ọcha karịa ihe ọ bụla ọzọ, ma na mbara igwe, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ebe ọ bụla dị mma, dịka ọmụmaatụ, n'elu osisi, ma gbalịa ihichapụ ha na ọkpụkpụ dị mma na-agba alụkwaghịm dị egwu. Kedu ihe a ga-eji mee ihe maka ilekọta kichin na plastic iji nweta ịdị ọcha zuru oke na-emebighị elu?
Ihe ngwọta kacha mma bụ ngwọta ncha. Na mmiri ọkụ, na-agbaji ntakịrị nwantakịrị nwa ma ọ bụ gel na-esi nri. Nhọrọ nke abụọ dị irè karị ma ọ bụrụ na ọ bụghị nanị maka iwepụ mkpịsị aka site na facade, kamakwa iwepụ abụba. Na ngwaahịa a gwụchara, anyị na-esikwasị ogbo ahụ ma hichaa oghere ndị dị n'akụkụ ya, mgbe nke a gasịrị, ọ dị mkpa iji obere microfiber na-agagharị na-enwu gbaa.
Ọ dịchaghị mkpa ịkọwa ihe ị ga - esi ghara ịsacha kichin plastic:
pụtara ịnweta chlorine;
Ekwesighi iji ihe ndi ozo mee ihe maka polishing;
mmiri maka nlekọta nke ngwongwo, efere, oven.
Ulo oku maka ulo obodo
Atụmatụ - nkume mmiri mmiri
Eckers - iche na ụdị nke owuwu
Nkwa si Rabinets
Ndị na-emepụta osisi sitere na osisi
Ụlọ ịsa ahụ na ime ụlọ mposi
Ụlọ Art Nouveau
Nri jikọtara ya na ụlọ nzukọ ahụ
Ngwongwo ihe owuwu
Ime ụlọ na ụdị nke mba - obodo dị aghụghọ
Nkume artificial mma
Ihe na-akpata nrụgide
Uru nke ugbua maka ahuike
Kedu ihe ị ga-eji breeches n'oge okpomọkụ?
Mmiri ude dị mma na ihe ọjọọ
Gypsum boardboard niches n'ime ime ụlọ ahụ
Kedu otu esi akọwa oge ole ime n'afọ?
Kedu ihe ị ga-eyi uwe na-enweghị aka uwe?
Mincemeat maka belaya
Isiokwu n'elu maka kichin si chipboard
Usoro ọgwụgwọ Photodynamic na oncology
Enweghi anya site na komputa - ihe ime?
Nkọwa banyere nkewa nke Robert Pattinson na Talia Barnett